Caqabado soo wajahay waan waan laga dhex waday Rooble Musharixiinta – Banaadir Times
Caqabado soo wajahay waan waan laga dhex waday Rooble Musharixiinta
By banaadir 24th February 2021 110 No comment
Saacadihii la soo dhaafay waxaa Magaalada Muqdisho ka socday dadaalo loogu kala dab qaadayay Xubaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha & siihayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha ee Maxamed Xuseen Rooble, si loo baajiyo banaanbaxa ay ku dhawaaqeen musharixiinta.
Wararka laga helay kulamadii dhacay oo ay hor boodayeen Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qooqoor iyo xubno kale ayaa sheegaya in uu guuldareystay, kadib markii ay soo wajaheen caqabado waaweeyn dadaalkii socday.
Xubnaha uu horkacayay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa waday sidii ay u kulmi lahaayeen Midowga Musharixiinta iyo Ra’iisul Wasaaraha xilka siihaya ee Maxamed Xuseen Rooble si ay uga wada hadlaan joojinta banaanbaxa Jimcaha.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in waan wantii hore ay ku saleysneyd in xukuumadda xilka siiheysa ay raali-gelin ka bixiso wixii dhacay 19-kii Febaraayo, kadibna laga wada hadlo sidii xaalada loo qaboojin lahaa, hayeeshee la sheegay inay ku adkaatay dhinaca Madaxtooyada.
Xubnaha Midowga Musharixiinta oo ay horkacayaan Madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud & Sheekh Shariif ayaa waxaa ay ku adkeysanayaan in Jimcaha uu dhacayo banaanbaxa, halka Madaxtooyda Soomaaliya ay xoog iyo xeelad u adeegsaneyso sidii lagu joojin lahaa.
Todobaadkii hore 19-kii Bishan Febaraayo ayaa dowladda Soomaaliya hor-istaagtay banaanbax ka dhici lahaa Taalada daljirka Daahsoon, halka Musharixiin ay kamid yihiin Xasan Cali Kheyre & Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur & tageerayaashooda la rasaaseeyay xilli ay ku banaanbaxayeen wadada ka timaada Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Hindiya oo digniin kasoo saartay xaaladda Soomaaliya
Dowladda Soomaliya oo joojisay qabashada codsiyada Cusub ee baasaboorka
By banaadir 6th April 2021
Khilaaf soo kala dhex-galay Wasaaradda Batroolka & Guddi ka tirsan Golaha Shacabka
Maamulka Magalada Beledweyne oo Farriin u diray Hay’adaha Samafalka
By banaadir 2nd May 2021